Taliyaha Ciidanka AMISOM Gen. Subagle oo lagu wado in uu xilka wareejiyo – Kismaayo24 News Agency
Taliyaha Ciidanka AMISOM Gen. Subagle oo lagu wado in uu xilka wareejiyo
by Sakariye Sakariye 29th January 2018 045
Taliyaha Ciidanka AMISOM General Cusmaan Nuur Subagle ayaa dhowaan lagu wadaa inuu wareejiyo xilka uu hada hayo, maadaama uu gaba gabo ku dhow yahay qorshihiisa xil heynta ee loogu tala galay.
General Subagle oo la hadlayay warbaahinta Dowladda ayaa sheegay in hada ay socoto qaban qaabada uu xilka ku wareejin lahaa dhowaana uu xilka ku wareejin doono Taliye cusub oo ka socda AMISOM gaar ahaan dalalka qeybta ka ah Midowga Afrika.
Wuxuu sheegay Subagle inuu aad uga shalaynayo isaga oo aanan Al-shabaab ka xureyn dalka inuu xilka wareejiyo, balse wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyay in ay shaqada sii wadi doonaan Taliska cusub ee AMISOM.
Cismaan Nuur Subagle, ayaa xilkan si rasmi ah ugula wareegay Taliyihii hore ee AMISOM General Jonathan Rono oo u dhashay dalka Kenya 19-kii July 2016-kii, kadib markii ay dhamaatay xil heyntiisa.
Dowladda Itoobiya ayaa xilligaasi laga sugayay in ay soo magacowdo Taliye cusub oo xilka kala wareega Jonathan Rono, balse khilaaf ka dhashay arrintaasi ayaa sababtay in Dowladda Jabuuti ay soo dirto Subagle oo dhalasho ahaan ka soo jeeda dalkaasi.
Xaalada Deegaanka Tukaraq Oo saakay degan iyo warar kala duwan oo ka soo baxaya dagaaladii ka dhacay deegaankaasi
DEG DEG:+SAWIRRO: Fanaan caan ah oo goordhaw isagoo dhaawac ah la dhigay cisbitaal ku yaala muqdisho
Tifaftiraha K24 22nd February 2017 22nd February 2017
Deg-Deg:- Xildhibaanada baarlamaanka Puntland oo xilkii ka qaaday gudoomiyihii baarlamaanka
admin 7th November 2019 7th November 2019
TOO S U DAAWO: Khudbad jeedinta musharixiinta oo lagu bilaabay Cumar C/rashiid Muxuuse hada sheegaya???